करिनाले लगाएको मास्कको मूल्य कति ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / करिनाले लगाएको मास्कको मूल्य कति ?
करिनाले लगाएको मास्कको मूल्य कति ?
छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै दैनिक उच्च संख्यामा संक्रमित थपिदै आएका छन् । बलिउडका स्टारहरु पनि एकपछि अर्को गर्दै कोरोना संक्रमित हुँदै आएका छन् ।
केही दिन पहिलेमात्र रणवीर कपूर गोविन्दा, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, परेश रावल, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर, कटरीना कैफ लगायतका कलाकारहरु कोरोनाको चपेटामा परेका छन् । यसरी बलिउडमा कोरोना भाइरसले प्रवेश गरेसँगै कलाकारहरुले सावधानी अपनाउन थालेका छन् ।
यस्तैमा अभिनेत्री करिना कपूरले आफ्ना प्रशंसकहरुलाई मास्क लगाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेकी छन् । तर, यतिबेला उनले लगाएको मास्क चर्चाको विषय बनेको छ । यसकारण चर्चामा आएको छ कि उनले लगाएको मास्कको मूल्य महँगो रहेको छ । हालै उनले कालो मास्क लगाएको एक तस्विर इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै लेखेकी छन्, ‘प्रपोगन्डा होइन, अनिवार्य मास्क लगाउनुस् ।’
करिनाले लगाएको मास्कमा सेतो अक्षरमा ‘एलभी’ लेखिएको छ । ‘एलभी’ ब्रान्डको वेबसाइटमा यो मास्कको मूल्य अमेरिकी ३५५ डलर रहेको छ । भारतको मूद्रामा यो मास्कको मूल्य २६ हजार र नेपालमा करिब ४१ हजार ६ सय पर्न जान्छ ।
साम्राज्ञीलाई मिस टिन उपाधि
लकडाउन बढ्यो भने ‘राधे’ अर्को बर्षको इदमा रिलिज हुन्छः सलमान खान
‘माइतीघर २’मा अनमोल केसी
वियोन्ससँग नयाँ गीत गाउने तयारीमा मदनकृष्ण
अक्षय कुमारले किन गरे कंगनालाई गोप्य फोन ?
कंगना भन्छिन्–‘अक्षयले मेरो कामको तारिफ गरे, तर डरले बाहिर भनेनन्’